धर्म दर्शन Archives · sankhuwasavaonline
जनकपुरधाम :‘अनेकतामा एकता’को विशिष्ट उदाहरणको रूपमा रहेको मिथिला परिक्रमाका श्रद्धालु आज जनकपुरधामबाट कल्याणेश्वर प्रस्थान गरेका छन् । पन्ध्र दिने उक्त परिक्रमा फागुन प्रतिपदामा शुरु भई पूर्णिमाका दिन सम्पन्न हुन्छ । सो अनुसार बुधबारबाट शुरु हुने भनिएको परिक्रमा तिथिमितिमा घटबढका कारण बिहीबारबाट शुरु भएको छ । मिथिला महात्म्यकाअनुसार मिथिलापुरीको यात्राफल राम्रो मानिन्छ । मिथ...
फागुनकृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव शिवको पूजाराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गएर श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजाराधना गर्छन् । शिवपुराणका अनुसार भगवान शिवको पुजा गर्दा मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास छ। शिवजीलाई मन्त्रका देवता पनि भनिन्छ। त्यसैले शिवरात्रीमा मन्त्रको उपाय अप्नाउदा श...
काठमाडौँ : सिमसिमे पानीको बाबजुद पनि महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ । बिहान २ बजेदेखि भक्तजनको भीड लागेपछि ३ः१५ बजेदेखि पशुपतिका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक भोला सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । पशुपति दर्शनका लागि तीनतिरबाट मूल मन्दिर छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पिङ्गलास्थान, चार शिवालय हुँदै दक्षिण ढोकाबाट,...
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्, यद्यपि त्यो आकर्षण प्रेमका कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आकर्षणको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ। जे होस्, मेष राशिका लागि आकर...
काठमाडौं। आज मिति २०७४ साल माघ १७ गते बुधवार खग्रास चन्द्रग्रहण साँझ ५:३२ बजे शुरु भएर ७:१६ बजे मध्य र राती ८ बजेर ५७ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ । यो दिन सवैले बिहान ८ : ५५ बजे सम्म भोजन गरि सक्नु पर्ने छ । तर बालक, बृद्ध ,रोगिहरुको लागि छुट छ । यो ग्रहण लागेको बेलामा तिष्य , अश्लेषा नक्षत्र र कर्कट राशी भएका व्यक्तिहरुलाई अतिकष्ट हुनेछ । अरुहरुलाई भने सामान्य लाभ , हानी हुनेछ । त्यसै...
काठमाडौं । यही माघ १७ गते खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । बुधबार साँझ ५ बजेर ३३ मिनेट जाँदा खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको हो । यद्यपि, यो ग्रहण नेपालबाट भने नदेखिने खगोलविद जयन्त आचार्यले जनाएका छन् । यो ग्रहण नेपाल लगायत भारत, चीन मंगोलिया, जापान, मलेसिया, ताईवान, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, युरोप, रसिया, अलस्का र अफ्राकाका केही देशहरुबाट समेत देख्न सकिने जनाइएको छ । स...
माघ १७ अर्थात बुधबार चन्द्रग्रहण छ । साँझ ५ देखि राती ८ः४५ बजेसम्म चन्द्रग्रहण लाग्ने जनाएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, चन्द्रमा र पृथ्वीले चक्कर लगाउदै गर्दा सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी पुगेपछि पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न जाँदा चन्द्रग्रहण लाग्छ । विज्ञानले यसलाई समान्य प्रक्रियाका रुपमा लिने गरेको छ । यसले मानव जीवनमा केही फरक पर्दैन् । तर, शास्त्रहरुले भने यसलाई ...
यी राशि भएका मानिस अधिक चलाक र बुद्धिमान हुन्छन्, जानी राखौ
काठमाडौँ। हामी कति बुद्धिमान या समझदार छौँ भन्ने कुरा हामी आफैँ बताउन सक्दैनौ । समझदारी या हाम्रो बुद्धि कौशलको अनुमान तब मानिसलाई थाहा हुन्छ, जब हामी कुनै विपत्तिमा आफ्नो दिमागको सही प्रयोग गर्छौँ । चलाखीपूर्वक बुद्धिको प्रयोग गर्नु पनि एक कला हो, जो हाम्रो ज्योतिषीय गुणमा समावेश छ । हुनत: हरेक व्यक्तिमा आफ्नो गुण हुन्छ तर आज हामी राशिको माध्यमले थाहा पाउने छौँ कि वास्तवमा कुन...
यहि माघ १७ गते लाग्दैछ चन्द्रग्रहण, यी ४ राशी हुनेहरुकाे भाग्य चम्कने र कुन राशीलाइ कस्ताे प्रभाव?
काठमाडौँ। बि.स २०७४ माघ १७ गते, ३१ जनवरी को दिन खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । त्यस दिन ४ ओटा राशीलाइ भाग्य चम्कने दिन रहेको छ । त्यसकारण ती ४ ओटा राशी कुन-कुन हुन् र अन्य राशीहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्ने छ ? थाहा पाउनको लागि तलको भिडियो पुरा हेर्नुहोस् ।
कनकाई नदीमा मकर स्नान गर्नेको घुइँचो
झापा। झापाको कनकाई नदीमा मकर स्नान गर्न ठूलो संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। झापाका साथै मोरङ, सुनसरी, इलाम, सिरहा, सप्तरीलगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा भक्तजन मकर स्नानका लागि यहाँ आएका छन्। सौर्यमानको हिसाबले माघ महिना शुरु हुने पहिलो दिनलाई माघे सङ्क्रान्ति भनिन्छ । मकर राशिको नामबाट माघे सङ्क्रान्तिलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्ने गरिएको छ। माघ १ ग...